मिर्गौला रोग (Kidney Disease) र मानव स्वास्थ्य
फ्रेवुअरी 17, 2019 फ्रेवुअरी 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, मृगौला रोग
नेपालमा थाहै नपाई मिर्गौला रोगको कारण मर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्नु चिन्ताको बिषय हो । मिर्गौला रोग के कसरी लाग्न सक्छ यसका लक्षणबारे समयमा जानकारी हुन सके ठूलो उपलब्धी हुने देखिन्छ । कहिलेकाही मिर्गौला रोगको लक्षण नदेखिकन मानिस मर्न सक्छ । हामीले आफ्नो स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ यसो गर्नाले समयमा आफ्नो उपचार गर्न सहज हुने भएको छ । मिर्गौला रोगको लक्षण कतिपयलाई नदेखिन सक्छ । आज मैले मिर्गौला रोगबारे जानकारी पस्कने जमर्को गर्दैछु ।
खास रोगको प्रकार र त्यसको अवस्थामा धेरै कुरा निर्भर गर्छ । लक्षणहरू प्राय: अस्पष्ट हुन्छन् त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा मिर्गौला रोग हो वा होइन भन्ने कुरा छुट्टाउन गाह्रो हुन्छ । तल लेखिएका प्रमुख लक्षण मृगौला रोगमा देखिन सक्छ । अनुहार सुन्निनु, पेट र खुट्टा सुन्निनु मृगौला रोगमा प्राय: देखिने लक्षण हुन् । मृगौला रोगले गर्दा सुन्निएको कुरा सबैभन्दा पहिले प्राय: आँखामुनि देखिन्छ र यो बिहान सबैभन्दा प्रस्ट देखिन्छ ।
मृगौलाले काम गर्न छोड्नु सुन्निनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । तर के कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ भने सुन्निदैमा मृगौलाले काम गर्न छोड्ने चाँहि होइन । केही खास मृगौला रोगमा मृगौलाले सामान्य रुपमा काम गर्दा पनि सुन्निने समस्या हुन्छ । मिर्गौला रोगको अन्य लक्षणहरूमा अरुचि हुनु, वाकवाकी लाग्नु, उल्टी हुनु, मुखमा असामान्य स्वाद आउनु मृगौलाले काम गर्न छोडेको व्यक्तिले भोग्ने आम समस्या हो । मृगौलाले काम कम गर्न थाल्यो भने शरीरमा विषालु पदार्थको वृद्धि हुन्छ, जसले गर्दा वाकवाकी लाग्ने र उल्टी आउने समस्या हुन्छ ।
मृगौलाको समस्या भएका बिरामीहरूमा धेरै जसो उच्च रक्तचापको समस्या हुन्छ । कम उमेर (३० वर्षभन्दा कम) मा उच्च रक्तचाप भयो र निदान भएको समयमा रक्तचाप अत्यधिक बढी छ भने, त्यो मृगौला रोगका कारण हुन सक्छ ।
सामान्य उपचारबाट रक्तअल्पतामा सुधार भएन भने मृगौला रोगबारे जाँच गर्नुपर्छ ।
मृगौला रोगहरूमा पिसाबको मात्रामा कमी हुन सक्दछ । पिसाब पोल्ने, पिसाब लागिरहने र पिसाबबाट रगत र पिप निस्किने समस्या मुत्रनलीमा भएको संक्रमणका लक्षण हुन् । पिसाब वा अन्य परीक्षण गराएर मृगौला रोग वा अन्य कुनै रोग लागेको छ छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । गम्भीर मृगौलाको रोग, लामो समयसम्म पनि कुनै लक्षण वा संकेत बिनानै पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पनि आवश्यक हुन्छ ।
← जनमत सर्वेक्षण – वाइडबडी खरिद अनियमितता छानबिन गर्न गठित आयोग पदाधिकारीले नियुक्तिपत्र नै नपाई म्याद सकिनुमा तपाईको धारणा के छ ?
आइटी. पार्क र यसको अवस्था अन्योल →